ပခုက္ကူလေဆိပ်ကို နိုင်ငံတကာလေဆိပ်အဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်မည် - Yangon Media Group
ပခုက္ကူလေဆိပ်ကို နိုင်ငံတကာလေဆိပ်အဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်မည်
ရန်ကုန်၊ ဩဂုတ် ၅ – ပုဂံ-ညောင် ဦးလေဆိပ်ကို နိုင်ငံတကာလေ ဆိပ်အဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်မည်မ ဟုတ်ဘဲ ပခုက္ကူလေဆိပ်ကိုသာ နိုင်ငံတကာလေဆိပ်အဖြစ် အဆင့် မြှင့်တင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လေ ကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
ပုဂံယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် ဒေသအား ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာ ရင်းဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရပြီးဖြစ် ၍ နိုင်ငံတကာခရီးသွားများပိုမို ဝင်ရောက် လာနိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် လေယာဉ်ဖြင့် လာရောက်မည့်ခရီး သည်အရေအတွက် တိုးတက်များ ပြားလာနိုင်သည့်အပေါ် ပုဂံ-ညောင် ဦးလေဆိပ်သို့ လေယာဉ်ကြီးများ ဆင်း/တက်ခြင်းကိုခွင့်မပြုဘဲ လက် ရှိ ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းများ တွင်အသုံးပြုနေသော လေယာဉ် များဖြစ်သည့် Embraer-190 နှင့် ATR-72 လေယာဉ်များကိုသာ ဆက်လက်ဆင်းသက် အသုံးပြုသွား စေမည်ဖြစ်ပြီး ရေရှည်စီမံကိန်းအ နေဖြင့် နိုင်ငံတကာမှ Boeing 737-800 လေယာဉ်များအထိ ဆင်းသက်အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် ပုဂံ-ညောင်ဦးလေဆိပ်နှင့် (၂၂) မိုင်ခန့်ကွာဝေးသော ပခုက္ကူလေ ဆိပ်အား Master Plan ရေးဆွဲ၍ နိုင်ငံတကာလေဆိပ်အဖြစ်အဆင့် မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးရဲထွဋ်အောင် က
“ပုဂံ-ညောင်ဦးလေဆိပ်က လက်ရှိအနေအထားအရ နည်း နည်းကျဉ်းတယ်။ အင်တာနေရှင် နယ်လေဆိပ် တစ်ခုအဖြစ်အဆင့် မြှင့်တင်ဖို့ လတ်တလောမဖြစ်နိုင် သေးဘူး။ ပုဂံ-ညောင်ဦးထက်စာ ရင်နောင်မှာတော့ ပခုက္ကူလေ ဆိပ်ကိုနိုင်ငံတကာ လေဆိပ်အ ဖြစ်အဆင့်မြှင့်တင်ဖို့ ရည်ရွယ် ထားတယ်။ အင်တာနေရှင်နယ် ဆင်းဖို့ကိစ္စကတော့ ပုဂံ-ညောင်ဦး လေဆိပ်ကိုလုပ်မယ့်အစား ဝန်ကြီး က ပခုက္ကူလေဆိပ်ကို သွားကြည့် ရင်း ပခုက္ကူလေဆိပ်ကို လုပ်မယ်လို့ ပြောထားတယ်။ ဒါလည်း အခု ချက်ချင်းတော့ လုပ်လို့မရသေးဘူး။ နိုင်ငံတော်ငွေနဲ့ သွားမလား၊ ဖက်စပ် PPP စနစ်နဲ့သွားမလားဆိုတာက တော့ သုံးသပ်နေတုန်းပဲရှိသေး တယ်” ဟု ဩဂုတ် ၅ ရက်က ဒီမိုက ရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
ပုဂံ-ညောင်ဦး လေဆိပ်ကို နိုင်ငံတကာလေဆိပ်အဖြစ် အဆင့် မြှင့်တင်မည်မဟုတ်သော်လည်း လေ ဆိပ်၏ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် လေဆိပ်အဆောက်အအုံ ကို အကြီးစားမွမ်းမံပြင်ဆင်မှုများ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဦးရဲထွဋ်အောင်က “ပုဂံက ယူနက်စကို စာရင်းဝင်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ ခရီးသွား ပိုများလာမယ့် အနေအ ထားရှိတယ်။ နောက်နှစ်ရာသီတောင် မှ booking တွေပြည့်နေပြီလို့ ပြောတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ terminal ကိုတော့ နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်နဲ့ပဲ နည်းနည်းဖြည့်ပြီး ထည့်နိုင်သ လောက်လေး ထည့်မယ်။ အဆင့်မြှင့် တယ်ဆိုတာမှာ လက်ရှိအနေအထား မှာ သူကကျဉ်းနေတဲ့ အခန်းလေး တွေရှိတယ်။ ဒါကို ပြန်ပြင်မှာပေါ့။
schedule flight တော့မဟုတ်ဘူး။ general aviation flight တော့ လာဖို့ အစီအစဉ်လုပ်နေကြတာရှိ တယ်။ အဲဒါမျိုးကျရင် နိုင်ငံခြားကို ထွက်မယ့်ခရီးသည်နဲ့ ပြည်တွင်း ထွက်မယ့်ခရီးသည်တွေရဲ့ အဝင်အ ထွက်ကို အခန်းတွေပြန်ဖွဲ့တာတို့ လိုအပ်တဲ့ လဝကဘက်ကစက်တွေ တပ်ဆင်ဖို့ ဒါမျိုးတွေ လုပ်မှာပေါ့နော်။ ဘယ်တော့စလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အသေး စိတ်အစီအစဉ်တော့ မသိရသေး ဘူး ” ဟုပြောသည်။
နိုင်ငံတကာ လေဆိပ်အဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်မည့် ပခုက္ကူလေ ဆိပ်မြေဧရိယာ စုစုပေါင်းမှာ(၉၆၅ ဒသမ၃၅)ဧကဖြစ်ပြီး လျော်ကြေး ပေးချေရမည့် ယာမြေစုစုပေါင်း (၉၃၅ဒသမ၉၃) ဧကအတွက် တိုင်းဒေသကြီး မြေအသုံးချမှုစီမံ ခန့်ခွဲရေးကော်မတီမှ အတည်ပြု သတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်း စုစု ပေါင်းလျော်ကြေးငွေကျပ် ၁၄၀၃ ဒသမ၈၉၅သန်းအား၂၀၁၅ခုနှစ် မတ်လ၃ရက်နေ့တွင် ပခုက္ကူမြို့ နယ်၊ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ် ရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးခန်းမ၌မူလ တောင်သူများထံသို့ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူအဖွဲ့များဖြင့် စနစ်တ ကျလျော်ကြေးငွေ ပေးချေခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင် သီးခြားရန်ပုံငွေရရှိရန်အတွက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် တင်ပြ
ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေးများ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ထိခိုက်နာကျင်အောင် လုပ်ဆောင်မှု မြင့်တက်လာ
မြောက်ကိုရီးယား ပစ်လွှတ်ခဲ့သော ပဲ့ထိန်းဒုံးပျံများ တာတိုသွား တိုက်ချင်းပစ်လက်နက်များဖြစ်နိုင်ဟု တောင်ကိုရီးယား ပြော
ဒေသအလိုက် သရက်သီးများ ရင့်မှည့်ချိန် သိရှိနိုင်ရန် ဧပြီ စတုတ္ထအပတ်မှ စတင်၍ သုတေသနပြုလုပ်မည??
ရသအစုံ ပါဝင်မည့် ‘မိုးပန်းပွင့်ရဲ့သင်္ကေတ’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား မကြာမီ ရုံတင်မည်
သရုပ်ဆောင် လှမျိုးသဉ္ဇာနွယ်၏ မောင်ဖြစ်သူ သရုပ်ဆောင် စိုးသီဟ၏ ဗီဒီယိုဇာတ်ကား လေးကား မိတ်ဆက်??
ရွှေရည်လောင်းတဲ့ စာသင်ကျောင်းမှာ ငွေစီဖြာ ဘက်စုံကောင်းဖို့
တာချီလိတ် ရွှေတိဂုံ စေတီတော်ပေါ်၌ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား၊ ဖြစ်စဉ်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေ